Maamulka Qoor-Qoor oo eryay Shaqaale Badan | KEYDMEDIA ONLINE
Maamulka Qoor-Qoor oo eryay Shaqaale Badan
Galmudug ayaa waxay ka horumari la'dahay faragelinta dowladda fadhisa Muqdisho, oo disha ka maamusho islamarkaana u dhistay Maamulka uu hogaamiyo Qoor-Qoor.
DHUUSAMAREEB, Soomaaliya - Wasaaradda Maaliyadda Galmudug ayaa shaqada ka joojisay 40 shaqaale oo ka shaqeynaya Canshuur aruurinta degmada Caabud-waaq iyo Balanballe, oo katirsan gobolka Galgaduud.
Waxay Wasaaradda go'aankan kala tashatay Madaxweyne Qoor-Qoor, oo amray in dhamaan shaqaalaha ka howlgala labada magaallo shaqada laga eryo, kadib markii ganacsiga degaanada ay kasoo aruurin waayeen lacagta canshuurta ah.
Qoor-Qoor ayaa sidoo kale amray in la joojiyo illaa amar dame shaqada Wasaaradda Maaliyadda ka wadey Caabudwaaq iyo Balanballe, oo uu sheegay in Maamulkiisa dib u habeyn kus ameynayo.
Halkan hoose ka akhri qoraalka Wasaaradda:
0 Comments Topics: galmudug qoor-qoor